Wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Warqabadka SBC International – SBC
Wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Warqabadka SBC International
Posted by editor on June 11, 2011 Comments
Wararka SBC ee caalamka waxaa ka mid ah Magaalada Misaret oo la hareeyey, Madaxda Pakistan & Afgaanistaan oo ka wada hadley dagaalka ka dhanka ah Al-qaacida & warar kale oo fara badan.
Madaxda Pakistan & Afgaanistaan oo ka wada hadley dagaalka ka dhanka ah Al-qaacida
Afganistan iyo Pakistan waa laba dowladood oo daris ah,waxaana ay labada dal isaga mid yihiin dagaalka lagula jiro Daalibaanka iyo weliba Al qacida.
Madaxweynaha Afganistan Xamid Karzai waxaa uu sheegay in uu kala hadlay Madaxda Pakistan,Raysal Wasaaraha dalkaasi Yuusuf Ridaa Jaylaani iyo weliba Madaxweynaha Asiif Cali Zardaasi qaabka ugu sahlan ee ay isaga gacan siin karaan soo afjaritaanka dagaalka ay kula jiraan Al qacida iyo weliba Daalibaan.
Tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii ay Ciidamada Maraykanku ay ku dileen Hogaamiyihii Al qacida Sheekh Usama Bin ladin gudaha Pakistan,waxaa jiray tuhuno madaxda labada dhinac ay isu jeedinayaan.
Weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay xadka u dhexeeya Afganistan iyo Pakistan,gaar ahaana lagu dilay tobanaan ka tirsan Ciidamada Pakistan ayaa iyaguna qayb ka ah waxyaabaha fududeeyay in ay madaxda labada dhinac ay kulmaan.
Madaxweynaha Afganistan Xamiid Karzai waxaa sidoo kale kamid ahaa waxyaabaha ay madaxda Pakistan ka wada hadleen bixitaanka Ciidamada shisheeye ee Afganistan.
Ciidamada ka amar qaata Madaxweynaha Liibiya Mucamar Al Qadaafi oo hareereeyay Misraata ah.
Ciidamada ka amar qaata Madaxweynaha Liibiya Korneel Mucamar Al Qadaafi ayaa hareereeyay Magaalada qaniga ku ah shidaalka ee Misrataha,waxaana ay xireen dhamaan goobihii gargaarku uga imaan jiray kooxaha Kacdoonka oo iyagu ku sugnaa Magaaladaasi.
Ciidamada Korneel Qadaafi waxaa ay goor aan fogayn dhowr jeer isku dayeen in ay dib ugu laabtaan Misratah,laakiinse waa ay ku guul dareysteen kadib markii ay iska caabin xoogan kala kulmeen Kooxaha kasoo horjeeda eek u sugan Magaaladaasi.
Marinka Dekeda Misrataha,gaar ahaan dhinaca Bada cas ayaa ah goobta kali ah ee haatan uu gargaarka uga imaan karo kooxaha kacdoonka,maadaama dhinacyada kale oo dhan ay isku hareereeyeen Ciidamada Korneel Qadaafi.
Khasaaraha ka dhashay isku dhacyadii ugu dambeeyay ee Liibiya ayaa sii kordhaya,iyadoona duqaynada ay fulinayaan dhinacyada iska soo horjeeda ay tahay mid ay waxyeelo kasoo gaarayso dadka rayidka ah.
Dowlada Ruush-ka ayaa doonaysa in ay ku qanciso Korneel Qadaafi wadahadal uu la galo kooxaha kacdoonka,iyadoona Masuulka Ruush-ku ay u magacaabeen dalkaasi Miikhaayiil Margiloof uu sheegay in uu tagayo Triboli si uu ula hadlo Qadaafi.
Xaalada Dalka Liibiya ayaa sii xumaanaysa,iyadoona duqaymaha Nato ay yihiin kuwo sii kordhaya,lamana oga sida Korneel Qadaafi loogu qancin doono ka dagitaanka xilka si dhibaatada loosoo afjaro.
Banaabaxayaasha Dalka Yemen oo codsanaya in la maxkamadeeyo Cali C/lla Saalax
Waxaa weli ka socda wadanka Yemen banaabaxyada isbadal doonka ah ee lagu diidan yahay Nidaamka Cali C/lla Saalax,waxaana ay banaabaxayaashu weli ay dalbanayaan Maxkamadaynta Saalax xili uu bukaan jiif yahay.
17 kamid ah Gobolada Dalka Yemen waxaa ka soconaya banaabaxyada,iyadoona mudaaharadayaashu ay doonayaan in la sameeyo xukuumad KMG oo badasha Nidaamka Dowlada Cali C/lla Saalax.
Dadka banaabaxayaasha waxaa ay ku adkaysanayaan in aanay gorgortan ka galayn Maxkamadaynta Saalax,waxaana ay ku tilmaameen hadii ay ogolaadaan Khiyaanu ay ku sameeyeen dadkii ku nafwaayay Kacdoonka.
Wixii ka dambeeyay dhaawacii kasoo gaaray Madaxweyne Saalax Madaafiicdii lala beegsaday Madaxtooyada Sanca,waxaana aad u kordhayay rajada ah in uu burburay Nidaamkii mudada Sodon iyo Dhowrka sano ah ka talinayay dalkaasi.
Banaabaxayaashii Maalintii Jimca ah isugu soo baxay Yemen waxaa ay ku dhawaaqayeen Ereyo ay ka muuqatay doonitaankooda Maxkamadaynta Saalax iyo weliba dhamaan dadkii ka agdhowaa ee taageerayay Nidaamkiisa.
Marayanka oo ku eedeeyay Syria Masuuliyada tobanaan rayid ah oo ku dhintay Banaabaxyadii Maalintii jimcaha ka dhacay Dalkaasi.
Bayaan laga soo saaray Aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa waxaa dhaliil xoogan loogu jeediyay Nidaamka ka taliya Dalka Syria,iyadoona Ciidamada dalkaasi lagu eedeeyay in ay si kas ah u beegsadeen tobanaan rayid ah oo maalintii shalay ka qayb galayay banaabaxyadii Looga soo horjeeday Madaxweynaha dalkaasi ee Bashaar Al asad.
Maraykanku waxaa uu sheegay xiligan in ay tahay wakhtigii lagu cadaadin lahaa Madaxweynaha Syria in uu xilka ka dego,waxaana ay ku eedeeyeen in uu yahay Madaxweyne dalkiisa ku hogaaminaya Burbur,dadka rayidka ahna iska laynaya.
Hadalka Dowlada Maraykanka ayaa yimi xili ay sii kordhayso khasaaraha ka dhashay Banaabaxyadii Maalintii Jimcaha ka dhacay dalkaasi Syria,iyadoona la sheegay rasaas ay Ciidamada Dalkaasi si kas ah ay ugu weerareen banaabaxayaasha ay ku dhinteen in ka badan 28 qof.
Diyaaradaha Helicpters-ka ee Dowlada Syria ayaa la sheegay in ay ka qayb qaadanayeen kala cayrinta banaabaxayaasha,waxaana aad usii kordhay khasaaraha ka dhalanaya isku dhacyada kadib markii ay dad caraysan galeen saldhig Ciidan.
Dowlada Turkiga oo ahayd saaxiib dhow oo ay Xukuumada Syria lahayd ayaa camabaaraysay dhacdooyinkii ugu dambeeyay,iyadoona ugu baaqday xukuumada dalkaasi in ay joojiso waxyeelaynta shacabka.
Kumanaan Syrian ah ayaa ka gudbay xuduudka wadankaasi la wadaago Turkiga,iyagoo ka cabsi qaba in ay beegsadaan Ciidamada Syria.